izvo zvakanaka nezvakaipa zvemamiriro erima: heino & apos; nguva yekuishandisa uye nei
Kuru Nhau & Ongororo Izvo zvakanaka nezvakaipa zveRima Mode: Pano & apos; s nguva yekuishandisa uye nei
Kwemakore mashoma apfuura, imwe yeanonyanya kukumbirwa software maficha vashandisi vakachemera ndiyo inokudzwa & apos; yakasviba modhi ', kana' manheru maitiro ', kana uchida. IOS uye Android zvese zvakagashira masystem-akapfuura erima modhi mu2019, kunyangwe vazhinji vagadziri vefoni vatora zvaidiwa nevashandisi padyo nemoyo uye zvaisanganisira rima nzira mune yavo tsika Android mapindiro pakutanga. Izvi zvinoshandawo kune ruzhinji rwemaapps anonyanya kufarirwa anowanikwa pane ese Apple App Store uye Google Play Chitoro, uye nezvimwe zvishoma zvinoshamisira (kukutarisa pauri Instagram) unogona kuve neyako yakajeka interface. Zvinotaridza sekunge parizvino, iyo yakasviba modhi fad iri pano kuzogara.
Uye yakasviba modhi inorumbidzwa pese pese sezvo ichi chemashiripiti chinoshandura mufoni yako & apos; s maseru masystem ayo anozoita mashiripiti kudzikisira ziso, kuneta kwemaziso, kukubatsira iwe kurara zvirinani husiku, kugadzirisa nyika nzara, uye chii Iko kune chero chokwadi kune izvi kana ichiri imwe fadhi iyo inogona kunge ichinyatso kuita zvinokuvadza kupfuura zvakanaka?
Chii chinonzi rima modhi?
Yerima modhi kubva pakushandisa maonero
Nei rima modhi rinotaridzika kunge risiri rechisikirwo
Counter-poindi: Rima nzira uye iyo & apos; s maitiro pane myopia
Yakasviba Mode kubva kune dhizaini yekutarisa
Kunyangwe iwo akanangana mavara uye mavara akasiyana, erima modhi ndiyo dhizaini yechero chinongedzo chinoratidza kupenya kwemavara uye interface zvinhu zviri pane yakasviba kumashure. Mukupesana (hapana pun yakarongerwa), mwenje mode ndiyo yakanyanya kuwanda kimu scheme yekuratidzira rima mavara ari pamusoro yakajeka kumashure.
Zvinotoshamisa kuti zvakakwana, yerima modhi inotungamira nzira yakajeka nemakumi emakore. Pakati pekutanga kwayo, nzira yakasviba yakanga isiri mhinduro yakatarwa, asi chingori chigadzirwa cheiyo tekinoroji mukutanga kwekutanga kwemunhu komputa. Kudzoka mumazuva ekutanga ekombuta yemunhu, monochrome CRT monitors ne phosphorus yakashandiswa, uye pasi pemamiriro akajairwa, iyo phosphorus mukati yakaonekwa yakasviba. Iyo phosphorus yakangovhenekera apo danda re electron rakarova. Kuve monochrome, ekutanga macomputer monitors aigona kungoratidza chete vara rimwe, iro raitsanangurwa nerudzi rwephosphorus yakashandiswa - yakanyanya kuwanda yaive green monitors nekuda kweP1 green phosphorus, asi iwe unogona zvakare kuisa maoko ako paP3 amber-phosphorus sikirini, yaive inodikanwa kwazvo nekuda kwekudzikiswa kweziso uye kushomeka kwemushandisi & apos; s circadian rhythm, uye kunyangwe P4 chena-phosphorus yekutarisa kana iwe uine rombo rakanaka.
Yakasviba modhi nostalgia - IBM 5151 monochrome yekutarisa Zvichakadaro, software zvakare 'yakakurudzira' yakagamuchirwa yakagamuchirwa yeyakaomeswa maitiro Paunofunga nezvemakomputa ekare, iwe & apos; tinofungidzira zvakafanana chena / girini mameseji Prompt mukona yekumusoro kuruboshwe yemufananidzo wakasviba wakawanda, yaive default 'imba yekuchengetedza' yemakomputa mazhinji kuburikidza ne60s, 70s, uye ekutanga 80s . Aya ekutanga mushandisi maficha haana kana zvakawanda zvaiitika kwavari uye aive, nekutadza, kazhinji akasviba pakuonekwa.
Iyo chaiyo nguva iyo 'light mode' yakaona mwenje wezuva zvakati omei kupinza pasi, asi inogona kuve yakateedzerwa kune iyo Xerox PARC graphical mushandisi interface (iyo yakanyanya kufuridzira Apple & apos; s Macintosh uye akawanda mamwe masisitimu anoshanda panguva iyoyo ), iyo yakashandisa rima zvinyorwa uye zvinongedzo zviri pamusoro pechena zvakanyanya kumashure. Iyo & apos; inowirirana zvakabatana nekufambira mberi mune zvese zviratidziro tekinoroji uye kusvika kweazvino graphical mushandisi interface. Iwo akanyanya kumberi RGB CRT monitors, ayo aikwanisa kuratidza ruvara, akave iwo ekumberi eiyo 'mwenje mode' shanduko.
Xerox Alto muna 1973 yaive pakati pemakomputa ekutanga kushandisa light interface mode, iyo yakafemera Apple & apos; s Lisa, Macintosh, uye mamwe masisitimu anoshanda.
Sevatariri vaive vava kukwanisa kuratidza kupindirana kwakaomarara, uye zvakanyanya kukosha, kupa machena machena, vagadziri vemakomputa uye mapurogiramu vakashandisa tekinoroji kutevedzera zera-rekare kutaridzika kwepepa rakanyorwa iro raifungidzirwa kuve rinonyanya kushandisa-rinoshamwaridzika kune enguva dzose maJoe aive kubhabhatidza mune inoshamisa nyika ye mobile komputa kekutanga. Kuti ibudirire, tekinoroji inoda kuve neushamwari uye isingatyisidzi. Iko kusimuka kwe skeuomorphism mumaGUI, ayo anonyatsoteedzera kutaridzika kwezvinhu chaiko-zvepasirese mune software, zvakare akashandisa mushe mwenje mode sezvo yaibvumidza kune zvimwe zvakasarudzika kuratidzwa kweiyo interface zvinhu uye imwe yakasarudzika kuratidzwa kwemumvuri.
Sezvineiwo zvakaringana, sekuvandudzwa kwetekinoroji yekuratidzira kwakapinza muchikamu chakakura che 'light mode', iyo & apos; iyo yakafanana kuvandudza tekinoroji tekinoroji iyo zvakare yakamutsa veruzhinji & maapos; s akamutsidzira kufarira munzvimbo dzakasviba - ndatenda, OLED!
Yerima modhi inoyevedza uye hudyu, hapana wechipiri kufunga nezve izvo. Kunyangwe zvingave zvisina kujeka seyakareruka modhi, yakasviba modhi inopindirana ine imwe charisma iyo inogona kusanganisirwa nehushingi, chimiro, kusanzwisisika, chakavanzika, simba, kugona, nezvimwewo zvakapetwa, zvese izvi hunhu zvinokwezva uye zvinodikanwa, kunyanya kana zvasvika pakushambadzira. Nekudaro, nhema dema rakasimba rinomutsa manzwiro akasimba muvanhu uye rinogona kukunda munhu zvakanyanya kana rikadarika.
Rima modhi inonyanya kubatsira kana iwe uchida kuratidza imwe mhando yezvinyorwa. Spotify, Netflix, uye Steam (kana iyo Tsvene Trifecta yekuverengera, sekuda kwandinoita kuvadaidza) anogona kunge ari iwo anozivikanwa maapplication uye masevhisi akagadzirwa aine akasviba maitiro mupfungwa. Sei? Nekuti ivo vanoda kuti iwe utore maziso ako akatarisa kune ane mavara uye ane hupenyu albha art, vhidhiyo uye mutambo zvigunwe. Yerima modhi inoita kuti yekupedzisira ibude mune yakasarudzika nzira iyo yakajeka nzira inogona & apos; t.
Iyo Tsvene Trifecta yekuverengera iri mune yakasviba modhi nekutadza Zvisinei, iyo & apos; inonyengera chaizvo kuburitsa yakanaka yakanaka nzira yemhando. Imwe kana ayo makuru matambudziko ari blurriness. Kune imwe, yakasviba modhi inotimanikidza kuvhura vadzidzi vedu zvimwe kuitira kuti vatore ruzivo rwakakosha rwekuona, izvo zvinotungamira kudzikisira kupinza kwese. Zvichakadaro, light mode interface inomanikidza vadzidzi vedu kuti vavhare pasi uye vagadzirise kune iyo yakajeka kupenya, iyo inovandudza kupinza. Hongu, izvo & apos; s chaizvo mashandiro emakamera mashandiro zvakare - akazaruka-akavhurika apertures anotora mwenje wakawanda asi aren & apos; t inopinza sekuvhurika kudiki kwekuvhura. Ichi chikonzero nei rima mavara pane chena kumashure angawanzo kuoneka akapinza kumeso ako.
Dilated vadzidzi vanoregedza mune imwe mwenje, asi vakaona kupinza kunotambura
Chimwe chinhu chekutarisa chiitiko chinonzi 'halation', inova iyo bane yevashandisi vane kutadza kuona uye nerima mode nzvimbo. Kunyangwe halation iri dambudziko rakakura nemaravara gradients, ine yakawanda mhedzisiro mhedzisiro pamatanho akanyanya kusiyanisa futi. Halations inoita chena chinyorwa chinoita kunge chashambidzwa uye ndokubuda ropa kune yakasviba kumashure uye chioneke nenzira blurrier kupfuura zvazviri chaizvo. Izvi zvinonyanya kuitika kune vanhu vane astigmatism uye / kana myopia (padyo-kuona-kuona), vane nguva yakaoma zvikuru nehafu.
Tarisa uone mufananidzo unoratidza pazasi. Kunyangwe iwe uine akakwana 20/20 chiratidzo, iwe ungangoona halos dzakatenderedza mavara machena anoratidzwa pane yakasviba kumashure. Zvichakadaro, iwe haugone kuona chero kushambidza uye kubuda ropa kuripo muchikamu chekuruboshwe chemufananidzo, icho chinoratidza mavara matema ari pamusoro chena kumashure.
Halos yakaratidza - light mode vs yakasviba modhi
Mhedzisiro iyi inogona kusimba kana ichitariswa nefonti iri pasi uremu:
Mifananidzo iri kurudyi inofanira kunge iine mahalos akawanda uye mavara anoita kunge achibuda ropa mukati memumwe uye kumashure zvakare. Iyi 'halation' mhedzisiro inofanirwa kuve yakajeka kana iwe & apos; tichirwara neastigmatism. Kune vanhu vakadaro, rima modhi inopindirana inogona kunge isingaoneke seyakanaka uye inogona kutungamira kune kumwe kushushikana kwemaziso sezvo iwe & apos; tichirwira kuita mavara. Halation ndiyo nzira, nzira isingawanzo kuenzanisike pane light mode interface, ndosaka vachikurudzirwa kune vanhu vari kutambura nemhedzisiro isingafadzi yeastigmatism.
Rima modhi rinotaridzika kunge risiri rechisikirwo
Zvakawanda zvidzidzo zvesainzi uye ongororo pamusoro pemakore zvakagumisa kuti huropi hwemunhu hwese asi hwakaomarara-hwakaomeswa uye hwakatemerwa kufarira mifananidzo yerima inoratidzwa pamusoro pekunze. Izvo & apos; zvinopokana kuti chikonzero cheicho chiri mukati medu pachedu shanduko semhando: edu marudzi,homo sapiens, anga aripo kwemazana mazana maviri ezviuru kusvika mazana matatu emakore zvisirizvo, uye kwe99% yenguva iyoyo, madzitateguru edu anga achinyanya kushanda mukati mezuva rese (diurnal species). Izvo & maapuro; akagashira kuti vanhu vekutanga vakagara mu savanna ye Africa, uye chii chiri chinhu chimwe icho & apos; ichokwadi nezve savanna ye Africa masikati? Ndizvozvo & apos; s kurudyi - inopenya yakajeka kumashure uye zvakajairika zvakasviba zvinhu zvinokanda mimvuri inorema. Nekudaro, iyo yekutanga homo sapiens uropi hwaifanirwa kushanduka nenzira yekuti ikurumidze uye zvine hungwaru kusiyanisa chikafu, maturusi anobatsira, zvikara zvine njodzi, uye zvimwe zvinhu zvinonakidza kubva kumashure nerubatsiro rwekuona kunooneka musiyano.
Unoda humwe humbowo? Let & apos; s titi izvo zvekutanga zvinozivikanwa zviitiko zvehunyanzvi hwevanhu - prehistoric madziro ekupenda akawanikwa mukati memapako mazhinji kutenderera pasirese - inoratidzira zvakakwana nei isu takatarirwa kufarira rima modhiyo midhiya. Googling 'prehistoric bako kupenda' ichakurumidza kukuratidza kuti ruzhinji rwemadzitateguru edu artier vaifarira zvinhu zvakasviba zvakadhonzwa pamusoro peyakareruka kumashure nekuda kwekuti ma & maapuro avakaona nyika yakavapoterera. Angave nyati, mammoths, mabhiza, shumba, zvipembere, uye kunyange vamwe vanhu, iwe & apos; tichaona nyaya dzakasviba dzakadhonzwa nemazimbe pamamiriro akajeka. Iwo ainyanya kumira kwandiri aive mifananidzo iri muChavet Cave muFrance, yakatarwa kuma 30,000 - 28,000 B.C., ayo akaomesesa pakuonekwa kwavo zvekuti vangangogona kuunganidza rumwe rudo pachiitiko chazvino chekuratidzira. Ndatenda, prehistoric Picasso!
Shumba dzichidzingirira mhuka, Chauvet Cave, France, munenge muna 30,000-28,000 B.C.
Meso edu angave asingabatsiri kana vasingakwanise kuona mutsauko wemaminiti pakati pezvinhu zvakasiyana, nekuti ivo vanonyanya kunetseka nekusiyana kwemisiyano inopesana pane kuvhenekera, kusvika padanho rekuti zvinhu zviviri zvine musiyano usingaenzanisike zvaizoonekwa se kusunganidzwa pamwe chete. Musiyano wakakosha zvekuti dai pasina iwo isu hatikwanise kuona nyika muzvikamu zvitatu.
Asi mira, kana musiyano uchinyanya kukosha, nei zvisiri & apos; ichokwadi kuti ese ari maviri mavara akapenya pane yakasviba kumashure, uye inopesana, nerima zvinyorwa pane yakajeka kumashure, zvine zvakafanana zvine simba musiyano zvivakwa? Izvi ichokwadi, asi zvidzidzo zvesainzi zvakagumisa kuti huropi hwemunhu hunoshanda zvirinani kana hwaratidzirwa kune yakanaka uye kwete yakaipa polarity.
Mundima yesainzi, mavara akajeka pamusoro peseri rima, atinoti ma & apos; nzira yakasviba 'mazuva ano, anonzi'yakaipa polarity'. Zvakare, rima mavara pamusoro peshure yakajeka, iyo yatinoidza se 'mwenje mode', inozivikanwa se 'polarity yakanaka'. Chidzidzo chakaitwa naA. A. Buchner naN. Baumgartner kumashure muna2007 vanoti uropi hwemunhu hunogadzirirwa kuti hufarire zvakanaka pamusoro pehunhu hwakashata kana zvasvika pakutarisa nekumhanyisa, kuisa pfungwa, uye kuongorora 'kuita', izvo zvine zvazvinoreva zvakanyanya kuhupenyu hwedu hwemadhijitari. mazuvano. Mushure mezvose, zvizhinji zvezvinhu zvatinoita pane edu zvishandiso zvinotenderera pakuverenga nekunyora zvinyorwa. Buchner naBaumgartner vanoona kuti ichi ichokwadi zvisinei nemwenje, saka hazvina basa kuti masikati & husiku, masikati machena, nzvimbo dzemwenje dzinokutendera kuti utarise nekukurumidza pane zvinyorwa uye kuratidza zvinhu, nepo rima modhi inosangana ichaita kuti ive yakaoma kusiyanisa zvinyorwa uye zvinooneka zvemukati zvinhu, nekudaro zvichitadzisa kuverenga kwako kuita uye pakupedzisira uchinetsa maziso ako.
Pane & apos; s chikonzero chakaringana cheizvozvo - chena zvinyorwa zvinopesana nerima kumashure zvinoita kunge zvisiri zvechisimba kwatiri nekuti izvo zvakasiyana nezvakanyorwa pamapepa.
Misiyano mukuverenga inoratidzwa
Mune zvakateedzana zvekuyedza, kuongorora kwekuongorora kwaive kuri nani zvirinani neyakajeka polar (rima mavara pane yakajeka kumashure) pane ine yakasarudzika polarity kuratidza (yakajeka mavara pane rima kumashure). Iyi yakanaka polarity mukana yaive yakazvimiririra nemwenje wekuvhenekera (rima vs. chaiyo oct kuvhenekera) uye ye chromaticity (nhema uye chena vs. bhuruu uye yero). Chiedza chekupedzisira chakaratidza kuti kusiyana kwemavara (mavara matsvuku pane yakasvibirira) haigone kutsiva kushayikwa kwekuvhenekera. '
Imwe kudzidza inowana kuti yakanaka kuratidza polarity inonyanya kubatsira kana zvasvika pakuverenga zvinyorwa zvidiki pane zvinoratidzwa. Chidzidzo ichi chakawana ichi chichiitika kune ese marudzi emidziyo anoshandisa ekuratidzira kuratidza ruzivo, asi zvakanyanya kune mafoni azvino sezvo ari iwo chaiwo svikiro rakapararira kwazvo kune zvinyorwa uye midhiya yekushandisa. Uye aya haasi & apos; kunyangwe zvese zvidzidzo zvakagadzirisa nyaya yezvakanaka zvichipesana nezvakaipa polarity. Tinker (1963). Radl (1980), Bauer naCavonius (1980), Cushman (1986), Gould et al (1986), nevamwe vese vaona kuti huropi hwemunhu hunonakidzwa nekuverengeka nekukurumidza uye hunofarira mavara erima nezvinhu zvinoratidzwa pachiedza.
Hanna naHoro kubva kuYunivhesiti yeMissouri
Counter-poindi: Nei rima modhi yakanaka kumeso ako
Chirevo chesainzi chakanzi 'Kuverenga neMyopia: Siyanisa Polarity Matters', yakaitisa Andrea C. Aleman, Min Wang, naFrank Schaeffel ( verenga pano ) iyo yakaburitswa paNature.com inoongorora mhedzisiro yekusiyanisa polarity paziso revanhu, uye inosvika pamhedziso yekuti yakaipa polarity (yakasviba modhi) haina kukuvadza zvakanyanya pane zvaunoona mukufamba kwenguva kupfuura mwenje mwenje. Chirevo chinoona kuti izvo zvinofarirwa nemamiriro erima zvinonyanya kutadzisa kukura kwemyopia mumaziso ako, rinova iro izwi rekurapa rekuona padyo, nepo mwenje mode ichikurudzira kukura kwemyopia.
Myopia parizvino ndiyo nhamba yekutanga yekuona kusagadzikana muUS, iine anopfuura makumi mana muzana yevanhu vakuru vanotambura nekuona pedyo uye vachifanira kushandisa magirazi ekurapa uye / kana malenzi ekutaurirana. Sekumwe kufungidzira kwesainzi, hafu yevagari venyika muna 2050 ichave ichiona padyo, zvichiita kuti ive chirwere chakapararira zvakanyanya pasirese. Chimwe chezvikonzero zvemyopia ndiko kusada kusadikanwa kweiyo choroid, iyo 0.1-0.2mm yakatetepa yakatetepa iri pamusoro peiyo retina uye ine basa rekuipa iyo neoksijeni.
Ndeapi & apos; s kubatana pakati pemamiriro erima uye choroid, uye kusvika padanho rakakura, myopia? Kuti tipindure uyu mubvunzo zvakakwana, isu & maapos tinofanirwa kutora tarisa mukati memaziso edu.
Anatomy yeziso remunhu Cherekedza iyo retina kumashure kweziso? Kugona. Sezvaungave iwe uchiziva, iyo retina ndiyo isina mwero-inonzwika tambo yetishu kumashure kweziso rako iyo inotora ruzivo rwechiedza uye ichichishandura kune zviratidzo zvinotumirwa kuuropi hwako kuburikidza neiyo optic nerve. Kana iwe uchida fananidzo yazvino uno, kana huropi hwedu ikamera, iyo retina ndiyo inonzwa mufananidzo uye inoita inorema-kusimudza.
Asi, iro retina harisi denderedzwa rakaenzana remasero sezvaari & maapos; anoumbwa nemamwe mashoma maseru akaturikidzana ane zvinangwa zvavo zvekuzvipira. Iyo retina ine matanho matanhatu akasiyana. Iwe & apos; ungangodaro wakanzwa nezve tsvimbo maseru, ayo anoshanda zvakanyanya mune kudzima mwenje mamiriro, uye maconese maseru, ayo anokonzeresa edu ekuona kwemavara.
Anatomy yemunhu retina
Nekudaro, kuti tidzidze kuti rima modhi inoponesa sei maziso edu, tinofanirwa kutarisa zvakadzama kune yekupedzisira photosensitive layer yeiyo retina - ganglion maseru. Ganglion maseru anosanganiswa mumasumbu ane akasiyana chimiro chemuviri - epakati maapuro anotumidzwa ON zvivakwa, nepo piripiri inonzi OFF chimiro. Inoshandura izvo ON uye OFF zvimiro zvinoita zvakasiyana nezvichena zvinyorwa pane yakasviba kumashure uye nerima zvinyorwa zvichipesana neyakajeka kumashure, sekupedziswa mu 'Kuverenga neMyopia: Contrast Polarity Matters' mushumo naAleman, Wang, naSchaeffel.
Nhema nhema pabepa chena ine nzvimbo hombe dzakapenya dzine mwenje wenguva dzose. HAPANA ON kana OFF minda inogamuchira yaizopa chero chinobuda munzvimbo idzi. Nekudaro, pamitsara mitema yemavara, mhinduro zhinji dzinogamuchirwa dzinenge DZAKASHURE, nekuti mapikicha erima epakati eminda inogamuchira akakomberedzwa, paavhareji, akajeka mapikiseli, achigadzira kusiyana kwakashata. Kana kuburitswa kwenzvimbo dzese dzinogamuchira kuwedzerwa, mhedzisiro yacho ndeye 'OFF kutonga'. Izvo zvinopesana ndezvechokwadi kune yakajeka mavara pane yakasviba kumashure. Pakati pese, iyo padyo chiyero chekupenya kunzvimbo dzine rima kune 'imwe', yakanyanya kufanana iri ON uye OFF kukurudzira.
Zvichingotaurwa, chidzidzo chinoona kuti:
'Light mode',yakanaka polarity (rima mavara anoratidzwa pane yakajeka kumashure) inodarika iyoOFFganglion masero uye inomutsa myopia;
'Rima modhi', isina kunaka polarity (yakajeka mavara inoratidzwa pane yakasviba kumashure) inodarikaONganglion maseru uye inhibits myopia.
Saka, zvinorevei pano? Zvakanaka, pane zvirinani kana zvakanyanya, chirevo chataurwa pamusoro chinoona kuti kunyanya-kukurudzira maNG gangion maseru kunotungamira mukuonda kwechoroid yatakambotaura ndima dzinoverengeka zvisati zvaitika. Zvakare, kuwedzera-kukurudzira iyo ON maseru, izvo zvinogona kuitika kana iwe ukanyanya kushandisa rima modhi pane yako kifaa, zvinotungamira mukusimbisa kweiyo choroid. Chirevo chinonongedza kuti awa rekuwedzeredza maseru eOF kweawa yakatetepa iyo choroid neinenge 16 µm, nepo imwe awa rekuverenga mavara machena pane yakasviba yakasimbisa iyo choroid ne10 µm. Kunyangwe zvingaite kunge zvidiki uye zvisina basa, idzi misiyano muukobvu inogona kunge ichikanganisa maziso ako zvakanyanya.
Sezvatakambotaura, kukora kwechoroid kwakarongedzwa seimwe yezviratidzo zvekutanga zvebudiriro yemyopia - yakatetepa choroid inofungidzirwa kukurudzira myopia, nepo mukobvu wakakora unodzivirira kukura kwemyopia. Mune mamwe mazwi, mamiriro erima pafoni yako pamwe haadi kukutadzisa kuona pedyo, asi zvingangononoka kudzikisira izvi zvisingafadzi kumeso ako. Zvakare, zvetsika zviitiko apo rima mameseji anoratidzwa pane yakajeka kwazvo kumashure inokukuvadza zvakanyanya pane zvakanaka.
Rima modhi pamafoni edu
Isu takatosimbisa iyo pfungwa yekuti mazhinji emazuva ano mafoni emafoni atove nemamiriro erima kana achahwina imwe kupera kwegore. Izvo & apos; zvakaoma kuratidza kuti ndiani aive piyona mundima iyi, asi isu tinogona pamwe kubatanidza kuuya kwenzvimbo dzerima nekusimuka kweOLED kuratidza. Kamwe chete kushomeka, izvi zvisikwa zvinoratidzira zvishoma nezvishoma asi zvakadzikama zvakatora iyo yepamusoro-kumagumo mhemberero niche uye zvino inogona kuwanikwa pane chero gumi nepfumbamwe kubva pagumi emireza. MaOLED ari kutenderera mukati epakati, zvakare, uye zvingangodaro hazvitore nguva refu kuti LCD ive chitsauko chakapedzwa munhoroondo ye smartphone.
Chimwe chezvikonzero zvinogara zvichitaurwa nei rima modhiyo ichiita kunge inodikanwa nevashandisi vefoni ndeyayo ine zvishoma isingabatanidze kuverengeka, dhizaini, uye prehistoric mapako pendi - it & apos; s bhatiri kuchengetedza. Ehezve, iyo yekuchengetedza-bhatiri kugona kweOLED kuratidza hakugone kufuratirwa - sekuziva kwako, kana maOLED achiratidza nhema, iwo akanangana mapikisheni akadzimwa, ayo anoponesa imwe bhatiri. Izvi zvinopesana zvakanyanya neLCD zvinoratidzira, izvo zvinogara zviripo, zvisinei nemufananidzo uri kuratidzwa uye unodhirowa iwo wakaenzana simba kana iwe ukatarisa kune inopenya chena peji rewebhu kana chimwe chinhu chakasviba.
iOS 13 yakasviba modhi Samsung & apos; s OneUI nzira yemanheru Android 10 Q & apos; s rima theme Xiaomi & apos; s MIUI 10 yakasviba modhi Huawei & apos; s EMUI 10 yakasviba modhi OnePlus 'OxygenOS nzira yakasviba
Kuisa system-yakafara nzira yakasviba kune yako OLED foni uye kupenda ese ako anowanzo shandiswa maapps erima haigone kupeta kana katatu hupenyu hwako hwebhatiri pane zuva nezuva, asi zvingangokupa rinowedzera awa kana zvakadaro yehupenyu hwebhatiri, iyo inogona kuve yakakosha mune mamwe mamiriro.
Mhedziso: Unofanirwa kushandisa rima maitiro kana kwete?
Hongu, asi iwe unofanirwa kushandisa mwenje mode zvakare.
Zvisinei nechero humbowo, zvidzidzo, uye tsvagurudzo zviripo, kushandisa nzira yakasviba pamusoro pemwenje nzira iri pakupedzisira sarudzo yemunhu mumwe nemumwe. Hazvina mhosva kuti sainzi inoti chii, kana iwe uchida nzira yakasviba zvakanyanya, iwe & apos; tichazoshandisa nzira yakasviba. Kana iwe uri akareruka modhi munhu, chokwadi, enda kumberi - sarudzo ndeyako. Zvido zvemunhu zvinotonga mambo pano zvakare.
Ini pachangu, ndinonakidzwa neakawanda emukati meangu akapfeka nerima. Kana ini ndichiona mavhidhiyo kana kutarisa mifananidzo, rima modhi iriko nekumira, uye ini & apos; ndinotobuda munzira yangu yekugadzirisa yega yega yega yega kana webhusaiti yandinoshandisa zuva nezuva kuti ndive nerima mode, be iyo neyechitatu-bato app, yakapfava marongero ekuchinja, kana kunyange kuwedzeredza. Izvi zvinoshandawo mukuita odhiyo-yekuona basa zuva nezuva - zvese Adobe Photoshop uye Premiere zvinouya mune yakasviba modhi nekutadza, sezvo ichigadzira odhiyo-inoonekwa yezvinyorwa zvinobuda mune isingavhiringidzi nzira.
Yerima modhi mwari-tumira munzvimbo dzakadzima mwenje
Nezvose zvataurwa, ndinonzwa kuti vanhu vazhinji vanoshandisa nzira yakasviba zvisizvo. Ini ndinobvuma kuti ndakaita izvozvo, futi - mangoti rima nzira ikawedzerwa kuapp kana sevhisi yandaishandisa, ini ndakangoigonesa uye handina kumboidzima. Zvizhinji gare gare ndakazoona kuti rima modhi inongogoneswa chete panguva yehusiku, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchishandisa foni yako kurwisa kushaya hope, kana mune mamwe maapplication ayo ane zvakawanda zvemukati-zvinorema uye usa & apos; hazvireve kuverenga kwakawanda. Semuenzaniso, kutarisa imwe yeNetflix, vhidhiyo yeYouTube, kana kubhurawuza kuburikidza negalari yako - muchidimbu, kwese kwausingapi mavara mazhinji uye uchida kuti zvirimo zvinyatso kubuda.
Nekudaro, mazuva ano kuti ini & apos; ndasvinura, ini ndinovimba neakanaka-ol 'mwenje modhi masikati uye kana zvasvika pakuverenga / kunyora akawanda mavara chete nekuda kwezvikonzero zvinonzwisisika. Ndinozviita sei izvozvo? Kazhinji pamurume, asi pese pazvinokwanisika, ndinoronga nzira yakasviba kuti ivhure pane imwe nguva kana kuti ibatsire nekuzvidzivirira pachayo pakubuda kwezuva nekuvira kwezuva. Iko & apos; s kuyedza kuri nyore iwe kwaunogona kuyedza kuona kana uchida rima nzira kana kwete izvozvi - ingoenda kunze, pasi pezuva rakajeka, uye shandisa foni yako sezvaungaita. Kunyangwe pakupenya kwakanyanya, iyo yakasviba mode interface ingave yakaoma kugadzira kunze kwechiedza chimwe. Zvakare, iwe unofanirwa kushandura nzira yakasviba kana iyo yekuvhenekera mwenje ichiderera kuitira kuti ubvise imwe yeiyo inopofumadza-inopenya mwenje husiku. Ehezve, kudzikisa kupenya kana kugonesa bhuruu-mwenje firita mune ino chaiyo kesi kunogona zvakare kubatsira zvakanyanya.
Mukupera kwezuva, ko nzira yakasviba ingori fadhi kana inodiwa interface solution kune vakawanda? Ini ndinonzwa kuti & apos; s shoma yekoramu A uye diki yekoramu B: yakasviba modhi ndeye fashoni yemaitiro, asi ine kwayo chaiyo-hupenyu mashandisirwo ayo anoita kuti ive yakakosha sarudzo kune anozivikanwa mazuva ano mushandisi maficha senge Android iOS.
Kune imwe, ini ndinokoshesa chokwadi chekuti isu tinopihwa sarudzo yekusarudza pakati peyakajeka uye akareruka maitiro zvichienderana nezvatinoda chaizvo.
Zvese zvine mwero, kusanganisira zvine mwero.
Zvinyorwa & bhuku rezvinyorwa:
1. Andrea C. Aleman, Min Wang & Frank Schaeffel (2018). Kuverenga uye Myopia: Siyanisa Polarity Matters . Sayenzi Mishumo vol. 8, Chinyorwa nhamba: 10840 (2018)
piri. A. Buchner, N. Baumgartner (2007).Chinyorwa-kumashure polarity inogadzirisa mashandiro zvisinei nekuvhenekera kwakatenderedza uye musiyano wevara. Ergonomics Vol. 50, Nha. 7, Chikunguru 2007, 1036-10633. Piepenbrock, Mayr S, Buchner A (2013). Positive kuratidza polarity inonyanya kubatsira kune mashoma hunhu saizi: zvinorehwa pakuratidzira dhizaini. Zvemunhu Zviitiko: Iyo Journal yeHuman Factors uye Ergonomics Society, Zvita 20134. Bauer, D., Bonacker, M., naCavonius, C. R. (1988).Kuverenga kubva pabepa maringe nekuverenga kubva kuzvikwiriso.
5. Horo, R., Hanna, P.Mhedzisiro yeWebhu Peji Chinyorwa-kumashure Ruvara Masanganiswa pane Kuverengeka, Kuchengetwa, Aesthetics, uye Maitiro Ekuzvibata.. Maitiro & Ruzivo Technology Technology.
renyeredzi s7 kumucheto rugged kesi
software yekuvandudza hupenyu kutenderera dhizaini chikamu
Tora Super Mario Mhanya nehafu yemutengo kutanga paMario Zuva (Kurume 10)
Kutanga iyo split-screen mu Android 9.0 hakusi nyore sepayi
Akanakisa makesi makesi eSamsung Galaxy S7 kumucheto